Most short names and keywords that can be constructed with the mechanism in LDML Annotations are omitted. However,afew are included for comparison: #️⃣, ⛹️‍♀️, 🇦🇨, 🇪🇺, 🏳️‍🌈, 🏴‍☠️, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 🏿, 👦🏻, 👨‍⚕️, 👨‍⚖, 👨‍🦰, 👨🏻‍⚕️, 👨🏿‍⚖, 👨🏿‍🦰, 👩‍⚖, 👩‍❤️‍👩, 👩‍❤️‍💋‍👩, 👩‍👩‍👧, 👩🏼‍⚖, 👩🏿, 👪, 👮, 👮‍♀️, 👮‍♂️, 👮🏼‍♂️, 👮🏽‍♀️, 👮🏿‍♀️, 👮🏿‍♂️, 👶🏽, 💏, 💑, 🔟, 🚴, 🚴‍♀️, 🚴‍♂️, 🚴🏿, 🚴🏿‍♀️, 🚴🏿‍♂️, 🦰. In this chart, missing items are marked with “⊖”, ‘fallback’ constructed items with “⊗”, substituted English values with “⊕”, and values equal to their parent locale’s values are replaced with ≣.
| ပြုံးဖြဲဖြဲ | မျက်နှာ
| ပြုံး | ပြုံးဖြဲဖြဲ | မျက်နှာ | မျက်လုံးများ
| ပျော်ရွှင်မှု | မျက်နှာ | မျက်ရည် | ရယ်ရွှင်မှု
| ကြမ်းပြင် | မျက်နှာ | ရယ်မောသည် | လှိမ့်၍
| ပါးစပ် | ပြုံး | မျက်နှာ | ဟ
| face | laugh | mouth | satisfied | smile *မျက်စိကို ကြိတ်မှိတ်ထားသည့် ပြုံးဖြဲဖြဲ မျက်နှာ
| delicious | face | savouring | smile | yum
| delicious | face | savoring | savouring | smile | yum
| bright | cool | face | sun | sunglasses *နေကာမျက်မှန်ဖြင့် အပြုံးမျက်နှာ
🥰 1F970 *smiling face with3hearts
| adore | crush | in love *အသည်းပုံ ၃ ခုနှင့် အပြုံးမျက်နှာ
| တန်းတန်းစွဲ | မေတ္တာရှိနေသည် | မြတ်နိုးသည်
| blue | cold | face | rushed | sweat *ပါးစပ်ဟနေကာ ဇောချွေးပြန်နေသော မျက်နှာ
| face | fear | munch | scared | scream
en_AU: *face screaming in fear
| Munch | face | fear | scared | scream *ကြောက်လန့်စွာ အော်နေသော မျက်နှာ
🥵 1F975 *hot face
| feverish | heat stroke | hot | red-faced | sweating
en_AU: *hot face
| feverish | flushed | heat stroke | hot | red-faced | sweating *ဒေါသ မျက်နှာ
| ဇောချွေးပြန်နေသော | ပူသည် | ရှက်သွေးဖြန်း မျက်နှာ | အပူလျှပ်ခြင်း | အဖျားတက်ခြင်း
🥶 1F976 *cold face
| blue-faced | cold | freezing | frostbite | icicles *ရေခဲ မျက်နှာ
| နှင်းကိုက်နာ | ပြာနှမ်းနေသော မျက်နှာ | ရေခဲပန်းဆွဲ | အေးခဲခြင်း | အေးခြင်း
| cold | doctor | face | mask | sick
| cold | doctor | face | ill | mask | medicine | poorly | sick
en_CA: *face with medical mask
| cold | doctor | face | ill | mask | sick *ကျန်းမာရေး မျက်နှာဖုံးနှင့် မျက်နှာ
en_001, en_CA: *sneezing face
| angel | face | fantasy | halo | innocent *ရောင်လျှံစက်ဝန်းနှင့် မျက်နှာ
🥳 1F973 *partying face
| celebration | hat | horn | party *ပါတီပွဲတက် မျက်နှာ
| ပါတီ | အောင်ပွဲခံခြင်း | ဦးချို | ဦးထုပ်
🥴 1F974 *woozy face
| dizzy | intoxicated | tipsy | uneven eyes | wavy mouth *ကတုန်ကယင် မျက်နှာ
| ထွေနေသော | ပါးစပ်ရွဲ့ခြင်း | မူးဝေခြင်း | ရွဲနေသော မျက်လုံး | အရက်မူးခြင်း
🥺 1F97A *pleading face
| begging | mercy | puppy eyes *တောင်းပန်သော မျက်နှာ
| ခွေးပေါက်အသွင် ချစ်စဖွယ် မျက်လုံး | တောင်းပန်ခြင်း | သက်ညှာခြင်း
en_001, en_CA: *face with hand over mouth
| demon | devil | face | fantasy | imp *ဆိုးပေ
| creature | extraterrestrial | face | fantasy | ufo *ဂြိုဟ်သား
| alien | creature | extraterrestrial | face | monster | ufo *မကောင်းဆိုးဝါး ဂြိုဟ်သား
| dung | face | monster | poo | poop *ချေးပုံ
| evil | face | forbidden | monkey | see *မကောင်းတာကို မမြင်လို
| evil | face | forbidden | hear | monkey *မကောင်းတာကို မကြားလို
| evil | face | forbidden | monkey | speak *မကောင်းတာကို မပြောလို
| gender-neutral | unspecified gender | young
| gender-neutral | toddler | unspecified gender | young
| ငယ်ရွယ်သော | လိင်မခွဲခြားသော | လိင်သတ်မှတ်မထားသော
| young | young person *ယောက်ျားကလေး
| boy | young | light skin tone
en_AU: *boy: light skin tone
| boy | young | young person | light skin tone *ယောက်ျားကလေး − အသားဖြူရောင်
| Virgo | young | zodiac
| Virgo | young person | zodiac *မိန်းကလေး
🧑 1F9D1 *person
| adult | gender-neutral | unspecified gender *လူ
| လိင်မခွဲခြားသော | လိင်သတ်မှတ်မထားသော | အရွယ်ရောက်သူ
👱 1F471 *person: blond hair
| blond | blond-haired person *ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ
👨 1F468 *man
| adult *အမျိုးသား
👨‍🦰 1F468 200D 1F9B0 *man: red hair
| adult | man | red hair *အမျိုးသား − ဆံပင်နီ
| အဖို | အမျိုးသား | ဆံပင်နီ
👨🏿‍🦰 1F468 1F3FF 200D 1F9B0 *man: dark skin tone, red hair
| adult | man | dark skin tone | red hair *အမျိုးသား − အသားမဲရောင်နှင့် ဆံပင်နီ
| အဖို | အမျိုးသား | အသားမဲရောင် | ဆံပင်နီ
👱‍♂ 1F471 200D 2642 *man: blond hair
| blond | blond-haired man | man *အမျိုးသား- ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ
| ရွှေရောင် | ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ အမျိုးသား | အမျိုးသား
🧔 1F9D4 *man: beard
| beard | person *အမျိုးသား- မုတ်ဆိတ်ရှိသူ
| မုတ်ဆိတ် | လူ
👩 1F469 *woman
| adult *အမျိုးသမီး
| adult | woman | dark skin tone *အမျိုးသမီး − အသားမဲရောင်
👱‍♀ 1F471 200D 2640 *woman: blond hair
| blond-haired woman | blonde | woman *အမျိုးသမီး- ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ
| ရွှေရောင် | ရွှေရောင်ဆံကေသာရှိသူ အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး
🧓 1F9D3 *older person
| adult | gender-neutral | old | unspecified gender *အသက်ကြီးသူ
| လိင်မခွဲခြားသော | လိင်သတ်မှတ်မထားသော | သက်ကြီး | အရွယ်ရောက်သူ
| adult | man | old *သက်ကြီး အမျိုးသား
| adult | old | woman *သက်ကြီး အမျိုးသမီး
| ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု | ဆရာဝန် | သူနာပြု | အထူးကု ဆရာဝန် | အမျိုးသား
| ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု | ဆရာဝန် | သူနာပြု | အထူးကု ဆရာဝန် | အမျိုးသား | အမျိုးသား ကျန်းမာရေးလုပ်သား | အသားဖြူရောင်
| ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု | ဆရာဝန် | သူနာပြု | အထူးကု ဆရာဝန်
| ချိန်ခွင် | တရားသူကြီး | အမျိုးသား
| ချိန်ခွင် | တရားသူကြီး | အမျိုးသား | အသားမဲရောင်
| ချိန်ခွင် | တရားသူကြီး | အမျိုးသမီး
| ချိန်ခွင် | တရားသူကြီး | အမျိုးသမီး | အသားနုရောင်
| စားဖိုမှူး | အချက်အပြုတ် | အမျိုးသား
| စားဖိုမှူး | အချက်အပြုတ် | အမျိုးသမီး
| စက်ပြင်သူ | ပိုက်ဆက်သူ | မီးသမား | အမျိုးသား | အရောင်းအဝယ်သမား
| စက်မှုလုပ်ငန်း | စက်ရုံ | တပ်ဆင်ခြင်း | အမျိုးသား | အလုပ်သမား
| စက်မှုလုပ်ငန်း | စက်ရုံ | တပ်ဆင်ခြင်း | အမျိုးသမီး | အလုပ်သမ
| architect | business | man | manager | white-collar
en_AU: *man office worker
| business man | manager | office worker | white collar *အမျိုးသား ရုံးဝန်ထမ်း
| ဉာဏလုပ်သား | ဗိသုကာ | မန်နေဂျာ | လုပ်ငန်း | အမျိုးသား
| architect | business | manager | white-collar | woman
en_AU: *woman office worker
| business woman | manager | office worker | white collar *အမျိုးသမီး ရုံးဝန်ထမ်း
| ဉာဏလုပ်သား | ဗိသုကာ | မန်နေဂျာ | လုပ်ငန်း | အမျိုးသမီး
| biologist | chemist | engineer | man | physicist | scientist *အမျိုးသား သိပ္ပံပညာရှင်
| ဇီဝဗေဒပညာရှင် | ဓာတုဗေဒပညာရှင် | ရူပဗေဒ ပညာရှင် | သိပ္ပံပညာရှင် | အင်ဂျင်နီယာ | အမျိုးသား
| biologist | chemist | engineer | physicist | scientist | woman *အမျိုးသမီး သိပ္ပံပညာရှင်
| ဇီဝဗေဒပညာရှင် | ဓာတုဗေဒပညာရှင် | ရူပဗေဒပညာရှင် | သိပ္ပံပညာရှင် | အင်ဂျင်နီယာ | အမျိုးသမီး
| ကုဒ်ရေးသူ | ဆော့ဖ်ဝဲ | ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ | တီထွင်သူ | နည်းပညာရှင် | အမျိုးသား
| ကုဒ်ရေးသူ | ဆော့ဖ်ဝဲ | ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ | တီထွင်သူ | နည်းပညာရှင် | အမျိုးသမီး
| actor | entertainer | man | rock | singer | star
en_AU: *man singer
| entertainer | man | performer | rock singer | star *အမျိုးသား အဆိုတော်
| နာမည်ကျော် | ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ | ရော့ခ်တေးဂီတ | သရုပ်ဆောင် | အဆိုတော် | အမျိုးသား
| actor | entertainer | rock | singer | star | woman
en_AU: *woman singer
| entertainer | performer | rock singer | star | woman *အမျိုးသမီး အဆိုတော်
| နာမည်ကျော် | ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူ | ရော့ခ်တေးဂီတ | သရုပ်ဆောင် | အဆိုတော် | အမျိုးသမီး
| artist | man | palette
en_AU: *man artist
| artist | man | painter | palette *ပန်းချီဆရာ
| artist | palette | woman
en_AU: *woman artist
| artist | painter | palette | woman *ပန်းချီဆရာမ
| ဒုံးပျံ | အမျိုးသား | အာကာသယာဉ်မှူး
| ဒုံးပျံ | အမျိုးသမီး | အာကာသယာဉ်မှူး
en_CA: *man firefighter
| fire truck | firefighter | fireman | man
en_AU: *man firefighter
en_CA: *woman firefighter
| fire truck | firefighter | firewoman | woman
en_AU: *woman firefighter
| ပုလိပ် | ရဲ | အရာရှိ
| cop | man | officer | police | policeman *အမျိုးသား ပုလိပ် အရာရှိ
| ပုလိပ် | ရဲ | အမျိုးသား | အရာရှိ
| cop | man | officer | police | policeman | medium-light skin tone *အမျိုးသား ပုလိပ် အရာရှိ − အသားနုရောင်
| ပုလိပ် | ရဲ | အမျိုးသား | အရာရှိ | အသားနုရောင်
| cop | man | officer | police | policeman | dark skin tone *အမျိုးသား ပုလိပ် အရာရှိ − အသားမဲရောင်
| ပုလိပ် | ရဲ | အမျိုးသား | အရာရှိ | အသားမဲရောင်
| ပုလိပ် | ရဲ | အမျိုးသမီး | အရာရှိ
| ပုလိပ် | ရဲ | အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ | အရာရှိ | အသားလတ်ရောင်
| ပုလိပ် | ရဲ | အမျိုးသမီး | အမျိုးသမီး ရဲအရာရှိ | အရာရှိ | အသားမဲရောင်
| sleuth | spy
| investigator | sleuth | spy *စုံထောက်
| detective | man | sleuth | spy
en_AU: *man detective
| detective | investigator | man | sleuth | spy *အမျိုးသား စုံထောက်
| detective | sleuth | spy | woman
en_AU: *woman detective
| detective | investigator | sleuth | spy | woman *အမျိုးသမီး စုံထောက်
| Christmas | Claus | Father | Santa | celebration
| Christmas | Father Christmas | celebration | claus | father | santa
| Christmas | Father Christmas | Santa Claus | celebration *ဆန်တာ ကလော့စ်
| Christmas | Mrs Claus | Mrs Santa Claus | celebration *မစ္စစ် စန်တာကလော့စ်
🦸 1F9B8 *superhero
| good | hero | heroine | superpower *လူစွမ်းကောင်း
| ကောင်းမွန်ခြင်း | သူရဲကောင်း | အစွမ်း | အမျိုးသမီး လူစွမ်းကောင်း
🦸‍♀ 1F9B8 200D 2640 *woman superhero
| good | hero | heroine | superpower | woman *အမျိုးသမီး လူစွမ်းကောင်း
| ကောင်းမွန်သော | သူရဲကောင်း | အစွမ်း | အမျိုးသမီး
🦸‍♂ 1F9B8 200D 2642 *man superhero
| good | hero | man | superpower *အမျိုးသား လူစွမ်းကောင်း
| ကောင်မွန်သော | သူရဲကောင်း | အစွမ်း | အမျိုးသား
🦹 1F9B9 *supervillain
| criminal | evil | superpower | villain *ထိပ်တန်း လူဆိုး
| မကောင်းဆိုးဝါး | ရာဇဝတ်ကောင် | လူဆိုး | အစွမ်း
🦹‍♀ 1F9B9 200D 2640 *woman supervillain
| criminal | evil | superpower | villain | woman *အမျိုးသမီး ထိပ်တန်းလူဆိုး
| မကောင်းဆိုးဝါး | ရာဇဝတ်ကောင် | လူဆိုး | အစွမ်း | အမျိုးသမီး
🦹‍♂ 1F9B9 200D 2642 *man supervillain
| criminal | evil | man | superpower | villain *အမျိုးသား ထိပ်တန်းလူဆိုး
| မကောင်းဆိုးဝါး | ရာဇဝတ်ကောင် | လူဆိုး | အစွမ်း | အမျိုးသား
| စုန်းမ | ဝိဇ္ဇာ
| forbidden | gesture | hand | prohibited *မလို လက်ဟန်
| forbidden | gesture | hand | man | prohibited *တားမြစ်ကြောင်း လက်ဟန်ပြသူ အမျိုးသား
| forbidden | gesture | hand | prohibited | woman *တားမြစ်ကြောင်း လက်ဟန်ပြသူ အမျိုးသမီး
| haircut | man
en_AU: *man getting haircut
| haircut | hairdresser | man *ဆံပင်ညှပ်နေသူ အမျိုးသား
| haircut | woman
en_AU: *woman getting haircut
| haircut | hairdresser | woman *ဆံပင်ညှပ်နေသူ အမျိုးသမီး
| ပြေးနေသည် | မာရသွန် | အပြေးပြိုင်ပွဲ | အမျိုးသား
| ပြေးနေသည် | မာရသွန် | အပြေးပြိုင်ပွဲ | အမျိုးသမီး
| bunny ear | dancer | men | partying *ယုန်နားရွက်တပ် အမျိုးသားများ
| ကချေသည် | ပါတီပွဲလုပ်နေသည် | ယုန်နားရွက် | အမျိုးသား
| ကချေသည် | ပါတီပွဲလုပ်နေသည် | ယုန်နားရွက် | ယုန်နားရွက်တပ် အမျိုးသမီးများ | အမျိုးသမီးများ
| sauna | steam room
en_AU: *woman in steam room
| sauna | steam room | woman in steamy room *ချွေးထုတ်ခန်းတွင်းရှိ အမျိုးသမီး
en_AU: *man in steam room
| man in steamy room | sauna | steam room *ချွေးထုတ်ခန်းတွင်းရှိ အမျိုးသား
| bath | bathtub
en_AU: *person taking bath
| bath | bathtub | tub *ရေချိုးကန်တွင် ရေချိုးနေသူ
| hotel | sleep
en_AU: *person in bed
| hotel | sleep | sleeping *ခုတင်ပေါ်က လူ
| ball | golf
en_AU: *person golfing
| ball | golf | golfer *ဂေါက်သီးရိုက်သူ
| golf | man
en_AU: *man golfing
| golf | golfer | man *ဂေါက်ရိုက်နေသူ အမျိုးသား
| golf | woman
en_AU: *woman golfing
| golf | golfer | woman *ဂေါက်ရိုက်နေသူ အမျိုးသမီး
en_AU: *person surfing
| surfer | surfing *ရေလွှာလှိုင်းစီးသူ
| man | surfing
en_AU: *man surfing
| man | surfer | surfing *ရေလွှာလျှောစီးနေသည့် အမျိုးသား
| surfing | woman
en_AU: *woman surfing
| surfer | surfing | woman *ရေလွှာလျှောစီးနေသည့် အမျိုးသမီး
en_AU: *person rowing boat
| boat | person | rowboat
en_AU: *person swimming
| swim | swimmer *ရေကူးသူ
| man | swim
en_AU: *man swimming
| man | swim | swimmer *ရေကူးနေသူ အမျိုးသား
| swim | woman
en_AU: *woman swimming
| swim | swimmer | woman *ရေကူးနေသူ အမျိုးသမီး
| ball *ဘောလုံးပုတ်နေသူ
| ball | man *ဘောလုံးပုတ်နေသည့် အမျိုးသား
| ball | woman *ဘောလုံးပုတ်နေသည့် အမျိုးသမီး
en_CA: *person lifting weights
| lifter | weight | weightlifter
| weight | weightlifter *အလေးမနေသည့်သူ
| အလေး | အလေးမသူ
| အမျိုးသား | အလေးမသူ
| အမျိုးသမီး | အလေးမသူ
| bicycle | biking | cyclist
en_GB: *person biking
| bicycle | biking | cyclist | person cycling
en_AU: *person ridingabike
| bicycle | biking | cyclist | person biking *စက်ဘီးစီးသူ
| bicycle | biking | cyclist | person biking | dark skin tone
en_GB: *person biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | person cycling | dark skin tone
en_AU: *person ridingabike: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | person biking | person ridingabike | dark skin tone *စက်ဘီးစီးသူ − အသားမဲရောင်
| bicycle | biking | cyclist | man
en_GB: *man biking
| bicycle | biking | cyclist | man cycling
en_AU: *man ridingabike
| bicycle | biking | cyclist | man | dark skin tone
en_GB: *man biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | man cycling | dark skin tone
en_AU: *man ridingabike: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | man | man ridingabike | dark skin tone *စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသား − အသားမဲရောင်
| bicycle | biking | cyclist | woman
en_GB: *woman biking
| bicycle | biking | cyclist | woman cycling
en_AU: *woman ridingabike
| bicycle | biking | cyclist | woman | dark skin tone
en_GB: *woman biking: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | woman cycling | dark skin tone
en_AU: *woman ridingabike: dark skin tone
| bicycle | biking | cyclist | woman | woman ridingabike | dark skin tone *စက်ဘီးစီးနေသည့် အမျိုးသမီး − အသားမဲရောင်
en_CA: *person juggling
| balance | juggle | multi-task | multitask | skill
| juggling | man | multi-task
en_CA: *man juggling
| juggling | man | multi-task | multitask *ရွဲကစားပြသူ အမျိုးသား
en_CA: *woman juggling
| juggling | multi-task | multitask | woman
| Gemini | couple | man | twins | zodiac
en_CA: *two men holding hands
| Gemini | couple | man | men | twins | zodiac *လက်တွဲထားသော အမျိုးသား နှစ်ယောက်
| couple | hand | woman
en_CA: *two women holding hands
| couple | hand | woman | women *လက်တွဲထားသော အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်
| family | woman | girl *မိသားစု − အမျိုးသမီး အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကလေး
🦵 1F9B5 *leg
| kick | limb *ခြေထောက်
| ခြေဆံလက်ဆံ | ခြေဖြင့်ကန်ခြင်း
🦶 1F9B6 *foot
| kick | stomp *ခြေမျက်စိ အောက်ပိုင်း
| ကန်ကျောက်ခြင်း | ခြေဆောင့်ခြင်း
| backhand | finger | hand | point | up *အပေါ်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ပြန် အညွှန်း
| backhand | down | finger | hand | point *အောက်သို့ ညွှန်ပြနေသည့် လက်ပြန် အညွှန်း
en_CA: *call me hand
| OK | hand
en_CA: *OK hand
| OK | hand | perfect *အိုကေ လက်
| ILY | hand
en_CA: *love you gesture *ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ အမူအရာ
| ask | hand | please | pray | thanks *ယှက်ထားသည့် လက်များ
🦴 1F9B4 *bone
| skeleton *အရိုး
🦷 1F9B7 *tooth
| dentist *သွား
🦰 1F9B0 *red hair
| ginger | redhead *ဆံပင်နီ
🦱 1F9B1 *curly hair
| afro | curly | ringlets *ဆံပင်ကောက်
| ဆံနွယ်ခွေ | လူမည်းဆံပင်
🦳 1F9B3 *white hair
| gray | hair | old | white
en_CA: *white hair
| gray | grey | hair | old | white
en_AU, en_GB: *white hair
| grey | hair | old | white *ဆံပင်ဖြူ
| ဆံပင် | သက်ကြီး | အဖြူ
🦲 1F9B2 *bald
| chemotherapy | hairless | no hair | shaven *ထိပ်ပြောင်
| ကီမို | ဆံပင်မရှိ | ရိတ်ထားသည် | အမွေးမရှိ
en_001, en_CA: *left speech bubble
🥽 1F97D *goggles
| eye protection | swimming | welding *လေ/ရေကာ မျက်မှန်
| ဂဟေဆော်ခြင်း | မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်း | ရေကူးခြင်း
🥼 1F97C *lab coat
| doctor | experiment | scientist *စမ်းသပ်ခန်း ဝတ်စုံ
| စမ်းသပ်ခြင်း | ဆရာဝန် | သိပ္ပံပညာရှင်
| clothing | tie
| clothing | necktie *နက်ကတိုင်
| T-shirt | clothing | shirt | tee-shirt | tshirt
| clothing | shirt | tee | tshirt *တီရှပ်
| clothing | woman’s clothes *ဝတ်စုံ
| clothing | swim
| clothing | swim suit | two-piece *ဘီကီနီ
| clothing | woman
| clothing | top | woman | woman’s clothes *အမျိုးသမီး အဝတ်အစားများ
| clothing | coin
| accessories | coin *ပိုက်ဆံအိတ်
| bag | clothing | purse
| accessories | bag | tote *လက်ဆွဲအိတ်
| bag | clothing | pouch
| accessories | bag | clutch bag *လက်ကိုင်အိတ်
| athletic | clothing | shoe | trainer
| athletic | clothing | running shoe | shoe | trainer *အပြေး ဖိနပ်
🥾 1F97E *hiking boot
| backpacking | boot | camping | hiking *တောစီး ဘွတ်ဖိနပ်
| ကျောပိုးအိတ်ဖြင့် ခရီးသွားခြင်း | တောတွင်း ခြေလျင်ခရီးထွက်ခြင်း | ဘွတ်ဖိနပ် | အပျော်စခန်းချခြင်း
🥿 1F97F *flat shoe
| ballet flat | slip-on | slipper *ဒေါက်မပါ ရှူးဖိနပ်
| ကွင်းထိုးဖိနပ် | ခြေညှပ်ဖိနပ် | ဘဲလေး ဖိနပ်
en_CA: *baseball cap
en_AU: *baseball cap
| billed cap *ကက်ဦးထုတ်
| diamond | gem | jewel
en_CA: *gemstone *ကျောက်မျက် ရတနာ
🦝 1F99D *raccoon
| curious | sly *ရက်ကွန်းဝံ
| စူးစမ်းသော | လှည့်ဖြားသော
🦌 1F98C *deer
| stag *သမင်
🦙 1F999 *llama
| alpaca | guanaco | vicuña | wool *လာမာ ကုလားအုတ်
| ဂွာနာကို | ဗီကွန်းနာ | သိုးမွေး | အယ်လ်ပါကာ ကုလားအုတ်
🦏 1F98F *rhinoceros
| rhino *ကြံ့
🦛 1F99B *hippopotamus
| hippo *ရေမြင်း
| face | mouse
en_AU: *mouse face
| face | mouse | pet *ကြွက် မျက်နှာ
🐁 1F401 *mouse
| pet | rodent *ကြွက်ငယ်
🐀 1F400 *rat
| pet | rodent *ကြွက်
| bear | marsupial *ကိုအာလာ
🦘 1F998 *kangaroo
| Australia | joey | jump | marsupial *သားပိုက်ကောင်
| ခုန်ခြင်း | သားပိုက်ကောင်ငယ် | သားပိုက်ကောင်မျိုးနွယ် | သြစတြေးလျား
🦡 1F9A1 *badger
| honey badger | pester *ခွေးတူဝက်တူ
| bird | poultry *ကြက်ဆင်
| bird | poultry *ကြက်
| bird of prey *လင်းယုန်
🦢 1F9A2 *swan
| bird | cygnet | ugly duckling *ငန်း
| ငန်းပေါက်စ | ငှက် | ဒေါင်းမျိုး
| bird | wise
| bird of prey | wise *ဇီးကွက်
🦚 1F99A *peacock
| bird | ostentatious | peahen | proud *ဒေါင်း
| ငှက် | ဒေါင်းမ | မော်ကြွားသော | ဝင့်ကြွားသော
🦜 1F99C *parrot
| bird | pirate | talk *ကြက်တူရွေး
| ငှက် | စကားပြော | ပင်လယ်ဓားပြ
🐊 1F40A *crocodile
| alligator | croc *မိကျောင်း
| T. Rex | T. rex | Tyrannosaurus Rex *တီ ရက်စ်
| porpoise *လင်းပိုင်
| fish | tropical
en_AU: *reef fish
| Cancer | zodiac
| crustacean | seafood | shellfish *ကဏန်း
🦞 1F99E *lobster
| bisque | claws | seafood
| bisque | claws | seafood | shellfish *ကျောက်ပုစွန်
| ကဏန်းလက်မ | ခုံးဟင်းရည် | ပင်လယ်စာ
| seafood | shellfish | shrimp
| decapod | seafood
🐌 1F40C *snail
| mollusc *ခရု
| insect | pretty
| insect | moth *လိပ်ပြာ
| bug | insect | worm *ပိုးကောင်ကလေး
| beetle | insect | ladybeetle | ladybug
en_CA: *ladybug *ပိုးတောင်မာ
| arachnid *ပင့်ကူ
en_CA: *spider web
🦟 1F99F *mosquito
| disease | fever | insect | malaria | virus
| dengue | fever | insect | malaria | virus *ခြင်
| ငှက်ဖျား | ပိုးကောင် | ဖျားနာခြင်း | ဗိုင်းရပ်စ် | ရောဂါ
🦠 1F9A0 *microbe
| amoeba | bacteria | virus *အဏုဇီဝရုပ်
| ဗက်တီးရီးယား | ဗိုင်းရပ်စ် | အမီးဗား
| grain | rice | sheaf
en_CA: *sheaf of rice *ကောက်နှံပင်
🥭 1F96D *mango
| fruit | tropical *သရက်သီး
| အပူပိုင်း | အသီး
| eggplant | vegetable *ခရမ်းသီး
🥬 1F96C *leafy green
| bok choy | cabbage | kale | lettuce
en_GB: *leafy green
| bok choy | cabbage | kale | lettuce | pak choi *အရွက်ဖားဖား သစ်ရွက်စိမ်း
| ကိုက်လန် | ဂေါ်ဖီထုပ် | ဆလတ်ရွက် | တရုတ် ဂေါ်ဖီ
en_GB: *baguette bread
| baguette | bread | food | french | french stick
🥯 1F96F *bagel
| bakery | schmear
| bakery *ပေါင်မုန့်အကွင်း
| ထောပတ် | မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း
| burger | hamburger
en_CA: *hamburger *ဟမ်ဘာဂါ
| falafel | flatbread | food | gyro | kebab | stuffed
en_AU: *pita roll
| falafel | flatbread | food | gyro | kebab | pita | stuffed *နံပြားအစာသွတ်
🧂 1F9C2 *salt
| condiment | shaker *ဆား
| ဟင်းခတ်မှုန့် | ဟင်းခတ်မှုန့် ဘူး
en_CA: *canned food
en_AU: *battered prawn
| battered | fried | prawn | shrimp | tempura
🥮 1F96E *moon cake
| autumn | festival | yuèbǐng *လမုန့်
| ဆောင်းဦးရာသီ | တရုတ် လမုန့် | ပွဲတော်
| empanada | gyōza | pastie | samosa *အစာသွတ်မုန့်
| oyster pail | takeout box
en_AU: *takeaway container
| takeout *ထုပ်ယူသွားနိုင်သည့် ဘူး
| cream | dessert | ice | soft | sweet
en_AU: *soft serve
| cream | dessert | ice cream | sweet *ရေခဲမုန့် အပျော့
| cream | dessert | ice | sweet
en_AU: *ice cream
| cream | dessert | sweet *ရေခဲမုန့်
en_CA: *cookie *ကွတ်ကီး
🧁 1F9C1 *cupcake
| bakery | sweet *ကြက်ဥမုန့်
| မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်း | အချိုမုန့်
en_AU: *baked custard
| crème caramel | dessert | pudding | sweet
| pair of chopsticks *စားတူ
en_CA: *fork and knife
| Aquarius | cooking | drink | jug | zodiac
🧭 1F9ED *compass
| magnetic | navigation | orienteering *သံလိုက်အိမ်မြှောင်
| မြေပုံနှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်သုံး တောလမ်းခရီး ခြေကျင်လျှောက်ပြိုင်ပွဲ | လမ်းညွှန် | သံလိုက်သတ္တိ
🏕 1F3D5 *camping
| tent *စခန်းချနေခြင်း
🏟 1F3DF *stadium
| arena *ဘောလုံးကွင်း
🧱 1F9F1 *brick
| bricks | clay | mortar | wall *အုတ်
| တံတိုင်း | ရွှံ့ | အင်္ဂတေ
en_AU, en_CA: *mosque
en_CA: *Shinto shrine
en_AU: *Shinto shrine
| Shinto | religion | shrine *ရှင်တို ဘုရားကျောင်း
| Islam | Muslim | religion
| city | dusk | evening | landscape | sunset *နေဝင်ဆည်းဆာချိန် မြို့ပြရှုခင်း
en_GB: *milky way
| galaxy | space *နဂါးငွေ့တန်း
en_CA: *barber pole
en_CA: *railway car
| car | electric | railway | train | tram | trolley bus | trolleybus
| car | electric | railway | train | trolley bus *ရထားတွဲ
en_AU: *oncoming light rail
| light rail | oncoming | tram | trolleybus
| trolley bus | trolleybus *ဓာတ်ရထား
| engine | fire | truck
en_CA: *fire truck
en_AU: *fire truck
en_AU: *four-wheel drive
| RV | camper van | motorhome | recreational | sport utility
en_CA: *sport utility vehicle
| SUV | recreational | sport utility *ခရီးကြမ်းသုံးယာဉ်
| lorry | semi | truck
en_AU: *articulated truck
| bike | cycle *စက်ဘီး
🛹 1F6F9 *skateboard
| board *စကိတ်လျှောပြား
en_CA: *gas pump
en_AU: *petrol pump
| diesel | fuel | gas | pump | station *ဆီဖြည့်တိုင်
| light | signal | traffic
en_AU: *horizontal traffic lights
| lights | signal | traffic *ဘေးတိုက် အချက်ပြမီး
en_AU: *vertical traffic lights
| lights | signal | traffic *​ဒေါင်လိုက် အချက်ပြမီး
| boat | motorboat
en_CA: *motorboat *စက်တပ် လှေ
en_AU, en_GB: *aeroplane
| airplane *လေယာဉ်
en_AU, en_GB: *small aeroplane
| aeroplane | airplane | small airplane *လေယာဉ်ငယ်
en_AU, en_GB: *aeroplane departure
en_AU, en_GB: *aeroplane arrival
| aeroplane | airplane | airplane arrival | arrivals | arriving | landing *လေယာဉ် ဆိုက်ရောက်ခြင်း
| railway | suspension
en_AU: *cable railway
| cable | railway | suspension *ဓာတ်ကြိုးတပ် ရထား
| cable | gondola | mountain
en_GB: *mountain cableway
| cable | gondola | mountain | mountain cablecar *တောင်တက် ဓာတ်ကြိုးရထားလမ်း
| bell | bellhop | hotel
en_AU: *porter bell
| bell | hotel | porter *နှိပ်ခေါင်းလောင်း
🧳 1F9F3 *luggage
| packing | travel *ခရီးဆောင်အိတ်
| ခရီးသွားခြင်း | ထုတ်ပိုးခြင်း
en_GB: *mantelpiece clock
| clock | mantel clock *မီးလင်းဖိုစင် နာရီ
| 12 | 12:30 | clock | thirty | twelve
| 12 | 12.30 | 12:30 | 30 | clock | thirty | twelve | twelve-thirty
en_CA: *twelve thirty *ဆယ့်နှစ်နာရီခွဲ
| 1 | 1:30 | clock | one | thirty
| 1 | 1.30 | 1:30 | 30 | clock | one | one-thirty | thirty
en_CA: *one thirty *တစ်နာရီခွဲ
|2| 2:30 | clock | thirty | two
|2| 2.30 | 2:30 | 30 | clock | thirty | two | two-thirty
en_CA: *two thirty *နှစ်နာရီခွဲ
|3| 3:30 | clock | thirty | three
|3| 3.30 | 30 | 3:30 | clock | thirty | three | three-thirty
en_CA: *three thirty *သုံးနာရီခွဲ
|4| 4:30 | clock | four | thirty
en_CA: *four thirty
|5| 5:30 | clock | five | thirty
en_CA: *five thirty
|6| 6:30 | clock | six | thirty
| 30 |6| 6.30 | 6:30 | clock | six | six-thirty | thirty
en_CA: *six thirty *ခြောက်နာရီခွဲ
|7| 7:30 | clock | seven | thirty
| 30 |7| 7.30 | 7:30 | clock | seven | seven-thirty | thirty
en_CA: *seven thirty *ခုနစ်နာရီခွဲ
| 8 | 8:30 | clock | eight | thirty
en_CA: *eight thirty
|9| 9:30 | clock | nine | thirty
| 30 |9| 9.30 | 9:30 | clock | nine | nine-thirty | thirty
en_CA: *nine thirty *ကိုးနာရီခွဲ
| 10 | 10:30 | clock | ten | thirty
| 10 | 10.30 | 10:30 | 30 | clock | ten | ten-thirty | thirty
en_CA: *ten thirty *ဆယ်နာရီခွဲ
| 11 | 11:30 | clock | eleven | thirty
en_CA: *eleven thirty
| moon | quarter
en_GB: *first-quarter moon *လ၏ ပထမအပတ်
en_GB: *last-quarter moon *လ၏ နောက်ဆုံးအပတ်
| face | moon | quarter
en_GB: *first-quarter moon face *လဆန်းစ မျက်နှာ
en_GB: *last-quarter moon face *လဆုပ်လု မျက်နှာ
| danger | electric | lightning | voltage | zap *ဗို့အားမြင့်
| ပွဲတော် | မီးအိမ် | ဟော်လိုဝင်း
| ခရစ္စမတ် | ပွဲတော် | အပင်
| ပှဲတျော | မီးပနျး | မီးရှူးမီးပနျး | ၀ငျးလကျ
🧨 1F9E8 *firecracker
| dynamite | explosive | fireworks *ဗြောက်အိုး
| ဒိုင်းနမိုက် | ပေါက်ကွဲတတ်သော
| celebration | party | popper | tada
en_AU: *party popper
| celebration | party | popper | ta-da *ပါတီဗြောက်အိုး
| တာဒါ | ပါတီ | ပွဲတော်
| ပွဲတော် | ဘောလုံး | ရောင်စုံစက္ကူ
| Japanese | banner | celebration | star festival | tanabata | tree *တာနဘတ အပင်
| ဂျပန် | တံခွန် | ပွဲတော် | အပင်
| ဂျပန် | ပွဲတော် | ဝါး | အပင်
| ကျင်းပ | ဂျပန် | ပွဲတော် | အရုပ်
| ငါးကြင်း | တံခွန် | ပွဲတော်
| ခေါင်းလောင်း | ပွဲတော် | လေ
| celebration | ceremony | jugoya | moon | moon-viewing ceremony | otsukimi | tsukimi
en_CA: *moon-viewing ceremony *လ အခမ်းအနား
| ပွဲတော် | လ | လကြည့်ပွဲ အခမ်းအနား | အခမ်းအနား
🧧 1F9E7 *red envelope
| gift | good luck | hóngbāo | lai see | money *စာအိတ်နီ
| ကံကောင်းခြင်း | ငွေ | တရုတ်စက္ကူ | လက်ဆောင် | လိုင်စီးစက္ကူ
| ထုပ်ပိုး | ပွဲတော် | ဘူး | လက်ဆောင် | လက်ဆောင်ပေး
| ပွဲတော် | ဖဲကြိုး | သတိပေး
| လက်မှတ် | ဝင်ခွင့်
| စစ်တပ် | ဆုတံဆိပ် | ပွဲတော်
| ball | football | soccer
en_GB: *football *ဘောလုံး
🥎 1F94E *softball
| ball | glove | underarm *ဘောလုံးပျော့
| ပခုံးအောက်မှ လွှဲပစ်ခြင်း | ဘောလုံး | လက်အိတ်
| ကွင်း | ဘောလုံး
| ပွဲစဉ် | ဘောလုံး
| ဘောလုံး | အမေရိကန် | အမေရိကန်ဘောလုံး
| ဘောလုံး | ရာဂ်ဘီ | အမေရိကန်ဘောလုံး
| ဘောလုံး | ရက်ကက်
🥏 1F94F *flying disc
| ultimate *ချပ်ပြားဝိုင်း ပစ်
| ball | game | pins
en_AU: *tenpin bowling
| ကစားပွဲ | ဘောလုံး
| ကစားပွဲ | ဘောလုံး | ရိုက်တံ
| ball | field | game | hockey | stick
en_GB: *hockey *ဟော်ကီ
| ကစားပွဲ | ကွင်းပြင် | ဘောလုံး | ရိုက်တံ
| ကစားပွဲ | ရိုက်တံ | ရေခဲပြင် | ရော်ဘာဒိုးပြား | ဟော်ကီ
🥍 1F94D *lacrosse
| ball | goal | stick *လာခရော့စ်
| ဂိုး | ဘောလုံး | ရိုက်တံ
| ball | bat | game | paddle | table tennis
en_GB: *table tennis
en_AU: *table tennis
| ball | bat | game | paddle | ping pong *စားပွဲတင် တင်းနစ်
| ကစားပွဲ | စားပွဲတင်တင်းနစ် | ပင်ပေါင် | ဘက်တံ | ဘောလုံး | ရိုက်
| ကစားပွဲ | ကြက်တောင် | ဘာဒီ | ရက်ကက်
| လက်ဝှေ့ထိုး | လက်အိတ်
| goal | net
en_AU: *goal cage *ဂိုးပေါက်
| ice | ice skating | skate *ရေခဲပြင်စကိတ်
en_GB: *fishing pole
| angling | fish | pole
en_AU: *fishing rod
| bullseye | dart | game | hit | target
| စက်ကွင်းဗဟို | ထိမှန် | ပစ်မှတ် | ပွဲစဉ် | လက်ပစ်မြား
🧿 1F9FF *nazar amulet
| bead | charm | evil-eye | nazar | talisman
en_AU: *evil-eye amulet
| amulet | charm | evil-eye | nazar | talisman
en_CA: *nazar amulet
| bead | charm | evil eye | nazar | talisman *နာဇာ အမ်မြူလက်
| တာလီစ်မန်း | နာဇာ | ပုတီးစေ့ | မန္တန် | ယုတ်မာသော အကြည့်
🧩 1F9E9 *jigsaw
| clue | interlocking | piece | puzzle *ဂျစ်စော
| ချိတ်ဆက် | ပဟေဠိ | သဲလွန်စ | အပိုင်းအစ
🧸 1F9F8 *teddy bear
| plaything | plush | stuffed | toy *ကစားစရာ ဝက်ဝံရုပ်
| ကစားစရာ | ရုပ်လုံးသွင်း | အမွေးပွ
♟ 265F *chess pawn
| chess | dupe | expendable *နယ်စား
| စစ်တုရင် | လှည့်စားခြင်း | အကျယ်ချဲ့နိုင်ခြင်း
🧵 1F9F5 *thread
| needle | sewing | spool | string *အပ်ချည်
| ကြိုးစ | ရစ်လုံး | အချုပ်အလုပ် | အပ်
🧶 1F9F6 *yarn
| ball | crochet | knit *ချည်ခင်
| ဇာထိုးသည် | တစ်ချောင်းထိုး | ဘောလုံး
| bell | forbidden | mute | quiet | silent *အသံပိတ် ခေါင်းလောင်း
| drumsticks | music | percussions *ဗုံ
| arrow | cell | mobile | phone | receive *မြားနှင့် မိုဘိုင်း ဖုန်း
| computer | disk | floppy
en_AU, en_CA: *floppy disk
| computer | disk | diskette | floppy *ဖလော်ပီဒစ်
| cd | computer | disk | optical
en_AU: *optical disk
🧮 1F9EE *abacus
| calculation *ပေသီးတွက်ခုံ
en_CA: *movie camera *ရုပ်ရှင် ကင်မရာ
| tape | vhs | video
| VHS | tape | video *ဗီဒီယို ကက်ဆက်
| bulb | comic | electric | idea | light
en_AU: *light globe
| bulb | comic | electric | globe | idea | light *မီးလုံး
| banknote | bill | currency | money | note | yen *ယန်း ငွေစက္ကူ
| banknote | bill | currency | dollar | money | note *ဒေါ်လာ ငွေစက္ကူ
| banknote | bill | currency | euro | money | note *ယူရို ငွေစက္ကူ
| banknote | bill | currency | money | note | pound
| banknote | bill | fly | money | wings *အတောင်ပံပါ ငွေ
| card | credit | money *ခရက်ဒစ်ကတ်
🧾 1F9FE *receipt
| accounting | bookkeeping | evidence | proof *ပြေစာ
| စာရင်းကိုင်ခြင်း | စာရင်းကိုင်လုပ်ငန်း | အကိုးအကား | အထောက်အထား
| chart | graph | growth | money | yen
en_AU: *graph increasing with yen
| chart | chart increasing with yen | graph | growth | money | yen *ယန်းတန်ဖိုး မြင့်တက်နေသည့် ဇယားပုံ
| email | letter
| e-mail | email | letter *စာအိတ်
| letter | mail
| e-mail | email | envelope | incoming | letter | receive *အဝင် စာအိတ်
| arrow | e-mail | email | envelope | outgoing *မြားပါ စာအိတ်
| card | dividers | index
en_AU: *index card dividers
| card | index | rolodex
en_AU: *index card
| chart | graph | growth | trend | upward
en_AU: *graph increasing
| chart | chart increasing | graph | growth | trend | upward *မြင့်တက်နေပုံပြ ဇယား
| chart | down | graph | trend
en_AU: *graph decreasing
| chart | chart decreasing | down | graph | trend *နိမ့်ဆင်းနေပုံပြ ဇယား
| bar | chart | graph
en_AU: *bar graph
| map pin | pin *ဖိထိုးရသည့် ပင်အပ်
en_CA: *triangular ruler *ထောင့်မှန် ပေတံ
| cabinet | file | filing
en_AU: *filing cabinet
en_GB: *hammer and spanner
en_AU: *hammer and spanner
| gun | handgun | revolver | tool | weapon
| handgun | pistol | revolver | tool | weapon *ပစ္စတို
| Sagittarius | archer | arrow | bow | zodiac *လေးနှင့် မြား
| tool | wrench
| Libra | balance | justice | scale | zodiac *ချိန်ခွင်
🧰 1F9F0 *toolbox
| chest | mechanic | tool *တူးလ်ဘောက်က်စ်
| တူးလ် | ဗီရို | မက္ကင်းနစ်
🧲 1F9F2 *magnet
| attraction | horseshoe | magnetic *သံလိုက်
| ဆွဲအင်အား | မြင်းခွာ
🧪 1F9EA *test tube
| chemist | chemistry | experiment | lab | science *ဖန်ပြွန်
| စမ်းသပ်ခန်း | စမ်းသပ်ခြင်း | ဓာတုဗေဒ | ဓာတုဗေဒပညာရှင် | သိပ္ပံ
🧫 1F9EB *petri dish
| bacteria | biologist | biology | culture | lab *ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ဖန်ပြားခွက်
| ဇီဝပညာရှင် | ဇီဝဗေဒ | ဓာတ်ခွဲခန်း | ဗက်တီးရီးယား | ဗက်တီးရီးယား မွေးမြူခြင်း
🧬 1F9EC *dna
| biologist | evolution | gene | genetics | life
| biologist | evolution | gene | genetics | life *မျိုးရိုးဗီဇ
| ဆင့်ကဲဖြစ်စဥ် | ဇီဝပညာရှင် | ဗီဇ | မျိုးရိုးဗီဇပညာ | သက်ရှိ
| antenna | dish | satellite
en_AU: *satellite dish
| medicine | needle | shot | sick *ဆေးထိုးအပ်
en_CA: *couch and lamp
en_AU: *couch and lamp
| couch | hotel | lamp | sofa | sofa and lamp
🧴 1F9F4 *lotion bottle
| lotion | moisturizer | shampoo | sunscreen
en_GB: *lotion bottle
| lotion | moisturiser | shampoo | sunscreen *လိမ်းဆေးဘူး
| ခေါင်းလျှော်ရည် | နေပူခံလိမ်းဆေး | လိမ်းဆေး | အလှဆီ
🧷 1F9F7 *safety pin
| diaper | punk rock
en_GB: *safety pin
| nappy | punk rock *တွယ်ချိတ်
| ကလေး ခါးထောင်းကျိုက်ပိတ်စ | ပန့်ခ် ရော့ခ်
🧹 1F9F9 *broom
| cleaning | sweeping | witch *တံမြက်စည်း
| စုန်းမ | တံမြက်လှည်းခြင်း | သန့်ရှင်းရေး
🧺 1F9FA *basket
| farming | laundry | picnic *ခြင်းတောင်း
| စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး | ပျော်ပွဲစား | အဝတ်လျှော်ခြင်း
🧻 1F9FB *roll of paper
| paper towels | toilet paper
en_GB: *roll of paper
| paper towels | toilet paper | toilet roll *လက်သုပ်စက္ကူလိပ်
🧼 1F9FC *soap
| bar | bathing | cleaning | lather | soapdish *ဆပ်ပြာ
| ဆပ်ပြာခွက် | ဆပ်ပြာတုံး | ဆပ်ပြာမြှုပ် | ရေချိုးခြင်း | သန့်စင်ခြင်း
🧽 1F9FD *sponge
| absorbing | cleaning | porous *ရေမြှုပ်
| စိမ့်ဝင်ခြင်း | စုပ်ယူခြင်း | သန့်စင်ခြင်း
🧯 1F9EF *fire extinguisher
| extinguish | fire | quench *မီးသတ်ဘူး
| ငြိမ်းသတ်ခြင်း | ငြိမ်းသတ်သည် | မီး
en_CA: *shopping cart
en_GB: *shopping trolley
en_AU: *shopping trolley
| ATM | ငွေထုတ်စက် | ဘဏ်စာရေး | အလိုအလျောက်
en_CA: *litter in bin sign
| garbage | litter | litter bin | trash
| အမှိုက် | အမှိုက်ပုံး
| drinking | potable | water
en_GB: *drinking water *သောက်ရေ
| ရေ | သောက်
en_AU: *wheelchair symbol
| access | disabled access *ဘီးတပ်ကုလားထိုင်
en_CA: *men’s room
| wc | ရေအိမ် | အမျိုးသား | အမျိုးသား အခန်း | အိမ်သာ
en_CA: *women’s room
| wc | ရေအိမ် | အမျိုးသမီအခန်း | အမျိုးသမီး | အိမ်သာ
| WC | ရေအိမ်
| baby | changing
en_AU: *baby symbol
| baby | change room | changing *ကလေး သင်္ကေတ
| ကလေး | လဲရန်
| amenities | bathroom | restroom | toilet | water closet | wc *ရေအိမ်
| wc | ရေ | အိမ်သာ
| entry | forbidden | no | not | prohibited | traffic
en_AU: *no entry
| denied | entry | forbidden | no | prohibited | traffic *မဝင်ရ
| entry | forbidden | no | not
| denied | entry | forbidden | no *တားမြစ်နေရာ
| bicycle | bike | forbidden | no | prohibited *စက်ဘီးမစီးရ
| forbidden | no | not | prohibited | smoking
en_AU: *no smoking
| denied | forbidden | no | prohibited | smoking *ဆေးလိပ် မသောက်ရ
| forbidden | litter | no | not | prohibited
en_AU: *no littering
| denied | forbidden | litter | no | prohibited *အမှိုက် မပစ်ရ
en_GB: *non-drinking water *သောက်ရေ မဟုတ်
| forbidden | no | not | pedestrian | prohibited
en_AU: *no pedestrians
| denied | forbidden | no | pedestrian | prohibited *ဖြတ်သန်း မသွားရ
| cell | forbidden | mobile | no | phone *မိုဘိုင်းဖုန်း မသုံးရ
| 18 | age restriction | eighteen | prohibited | underage *ဆယ့်ရှစ်နှစ်အောက် ခွင့်မပြု
en_AU, en_GB: *anticlockwise arrows button *ဘယ်ရစ် မြားများ ခလုတ်
| virgin | zodiac *ကန်
| archer | zodiac
| archer | centaur | zodiac *ဓနု
| bearer | water | zodiac
| water bearer | zodiac *ကုံ
| arrow | double | fast | forward
en_AU: *fast forward button *ရှေ့သို့အမြန် ခလုတ်
| arrow | double | rewind
en_GB: *fast-reverse button *နောက်သို့အမြန် ခလုတ်
| bright | brightness
en_AU: *bright button
| brightness | brightness button *လင်းစေရန် ခလုတ်
| antenna | bar | cell | mobile | phone *ဧရီယာတိုင် ဘားများ
| cell | mobile | mode | phone | telephone | vibration
en_CA: *vibration mode
| cell | mobile | mode | phone | telephone | vibrate | vibration *တုန်ခါမှု မုဒ်
♾ 267E *infinity
| forever | unbounded | universal
| eternal | forever | unbound | universal *အနန္တ
| ကမ္ဘာတစ်လွှား | ထာဝရ | အကန့်အသတ်မဲ့
| Japanese | beginner | chevron | leaf *စသင်သူအတွက် ဂျပန် သင်​္ကေတ
en_CA: *white heavy check mark
en_CA: *ballot box with check
en_AU: *ballot box with check
| ballot | box | tick
en_CA: *heavy check mark
en_AU: *heavy check mark
| heavy tick mark | mark | tick
| bangbang | exclamation | mark | punctuation
en_AU: *double exclamation mark
| exclamation | mark | punctuation *အာမေဍိတ် သင်​္ကေတ နှစ်ထပ်ကွမ်း
| exclamation | interrobang | mark | punctuation | question
en_AU: *exclamation question mark
| exclamation | mark | punctuation | question *အာမေဍိတ် မေးခွန်း သင်​္ကေတ
en_AU, en_CA: *input Latin uppercase *လက်တင် စာလုံးကြီး ထည့်ရန်
en_AU, en_CA: *input Latin lowercase *လက်တင် စာလုံးသေး ထည့်ရန်
en_AU, en_CA: *input Latin letters *လက်တင် စာလုံးများ ထည့်ရန်
| သက်တံ | သက်တံရောင်အလံ
🏴‍☠ 1F3F4 200D 2620 *pirate flag
| Jolly Roger | pirate | plunder | treasure *ပင်လယ်ဓားပြ အလံ
| ဂျိုလီရော်ဂျာ | ပင်လယ်ဓားပြ | ရတနာ | လုယက်ပစ္စည်း
🇦🇨 1F1E6 1F1E8 *flag: Ascension Island
| flag *အလံ − အဆန်းရှင်းကျွန်း
🇪🇺 1F1EA 1F1FA *flag: European Union
| flag *အလံ − ဥရောပသမဂ္ဂ
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1F3F4 E0067 E0062 E0073 E0063 E0074 E007F *flag: Scotland
| flag *အလံ − ⊕gbsct